Curtin University - Higher Education an-tany hafa any Aostralia
Study in Rosia
Curtin University Details
Firenena : Aostralia
fanafohezan-teny : Cu
Créé : 1966
mpianatra (eo ho eo.) : 49000
Aza adino ny miresaka momba Curtin University
Misoratra anarana ao amin'ny Curtin University
Curtin University (iray amantarana ny Curtin University of Technology) dia iray any Aostralia fikarohana oniversite-panjakana miorina any Bentley,Perth, Western Australia. Ny oniversite no atao hoe taorian'ny faha-14 Praiminisitra ny Aostralia, John Curtin, ary ny lehibe indrindra amin'ny oniversite tany Aostralia Andrefana, maherin'ny 50,000 mpianatra (tahaka ny 2014) amin'ny toerana anisan'izany Perth, Margaret River, Kalgoorlie, Malezia sy Singapore.
Curtin dia natolotra oniversite toerana rehefa lalàna dia nandalo ny Parlemanta ny Western Australia in 1986. Nanomboka tamin'izay, ny anjerimanontolo dia fanitarana ny fanatrehany sy manana campus ao Singapore sy Sarawak. Manana fifandraisana amin'ny 90 fifanakalozan anjerimanontolo in 20 firenena. Ny University dimy lehibe ahitana fahaizanareo maherin'ny 95 manam-pahaizana manokana foibe. Ny University taloha Sydney toeram-pianarana iray eo 2005 & 2016. On 17 Septambra 2015, Curtin University Filan-kevitry ny nanao fanapahan-kevitra hanakatona ny Sydney fonenan'ny mpianatra amin'ny tany am-boalohany 2017.
Curtin University dia mpikambana ao amin'ny Australian Technology Network (ATN), ary mavitrika amin'ny fikarohana ao amin'ny isan-karazany ny akademika sy azo ampiharina saha, anisan'izany ny Resources sy ny heriny (oh, solitany entona), Baovao sy ny fifandraisana, fahasalamana, Ageing sy ny Fahasambaranao (Public Health), Fiaraha-monina sy ny tontolo manodidina ny Manova, Fitomboana sy ny voninahitrao sy ny Creative Writing.
Izany no hany Andrefana Aostraliana oniversite mba hamokatra ny PhD mpandray ny AINSE medaly volamena, izay ambony indrindra fankatoavana ny PhD-ambaratonga fikarohana tsara any Aostralia sy Nouvelle-Zélande.
Curtin dia lasa mavitrika amin'ny fikarohana sy ny fiaraha-miasa any ivelany, indrindra ao amin'ny tanibe Shina. Izany no tafiditra amin'ny maro ny raharaham-barotra, fitantanana, ary ny fikarohana tetikasa, indrindra amin'ny supercomputing, izay ny oniversite mandray anjara ao amin'ny Tri-kontinanta nahay amin'ny nodes any Perth, Beijing, ary Edinburgh. Western Australia dia lasa manan-danja mpanondrana mineraly, solitany sy ny entona voajanahary. Ny Shinoa Wen Jiabao Premier nitsidika ny Woodside-vatsian'ny hydrocarbon fikarohana momba ny toerana nandritra ny fitsidihany an'i Aostralia in 2005.
sekoly / Colleges / Departments / Courses / fahaizanareo
Center for Aboriginal Fianarana
School of Business Lalàna sy ny hetra
Sekoly ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola
Sekoly Systems Fampahalalam-baovao
Faculty ny Fahasalamana Sciences
Sekolin'ny Nursing, Midwifery sy Paramedicine
Sekolin'ny Biomedical Science
Sekolin'ny ny asa Fitsaboana sy ny Asa Sosialy
Sekolin'ny Physiotherapy sy Exercise Science
Sekolin'ny Psychology sy miteny aretina
Faculty ny Humanities
Sekolin'ny nanao Tontolo_iainana
Sekolin'ny Design sy Art
Sekolin'ny Media, Kolontsaina sy ny Creative Arts
Faculty ny siansa sy ny injeniera
Sekoly simika sy Petroleum Engineering
Sekoly ny sivily sy ny Mechanical Engineering
Sekolin'ny elektrika Engineering sy computing
Western Aostralia Sekolin'ny Mines
Curtin University naorina tao 1966 tahaka ny Western Aostralia Sekoly Momba ny Teknolojia (MIANDRASA). Ny fototry ny fahatelon'ny lanjan'ny ahitana fandaharana ny Perth Technical College, izay nisokatra in 1900.
Curtin University toerana amin'izao fotoana izao ao amin'ny Bentley dia nofantenana tao 1962, ary nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tao 1966. Mpianatra nisoratra anarana voalohany ny taona manaraka.
In 1969, telo ireo andrim-panjakana hafa natambatra tamin'ny miandry: ny Aostralia Andrefana Sekoly Mines (nisokatra in 1902), ny Muresk Fambolena College (nisokatra in 1926), ary ny sekoly sy ny asa Physiotherapy Therapy (in miasa nanomboka tamin'ny taona 1950 tao Shenton Park). Teo anelanelan'ny 1966 ary 1976 Miandry za-draharaha ny fanitarana avy 2,000 ny 10,000 mpianatra.
Tamin'ny volana Desambra 1986 ny Aostralia Andrefana Sekoly Momba ny Teknolojia (MIANDRASA) natao oniversite, eo ambany fepetra ny WA Sekoly Momba ny Teknolojia Fanitsiana Act 1986. Curtin University naka ny anarany avy amin'ny Praiminisitra teo aloha ao Aostralia, John Curtin. Curtin nanaiky ny mpianatra voalohany ho toy ny oniversite 1987.
In 2005, Curtin sy Murdoch University dia anjara amin'ny maha- mety ny fianarana any an-mety ny fiombonana. Na izany aza, amin'ny 7 Novambra 2005, andrim-panjakana roa namoaka fanambarana an-gazety fa toy izany fiombonana dia tsy ho nanoratra.
In 2009, Curtin lasa ny oniversite voalohany ao amin'ny Australian Technology Network mba ho voasoratra ao amin'ny Academic Ranking ny World Oniversite ny fikarohana anjerimanontolo.
In 2010, Curtin nandatsaka ny “Momba ny Teknolojia” tovana, avy dia miasa toy ny “Curtin University”. Anarana ara-dalàna mbola Curtin University of Technology mandra-Act ambany izay miasa no ahitsy amin'ny alalan'ny governemanta Aostraliana ny tandrefana.
Ianao ve mila miresaka momba Curtin University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Curtin University ao amin'ny Map
Photos: Curtin University ofisialy Facebook
Zarao ity Info mahasoa miaraka amin'ny namana
Curtin University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Curtin University.
AZA HADINO FA: EducationBro Magazine manome anao fahafahana mamaky Info momba ny anjerimanontolo amin'ny 96 fiteny, fa mangataka aminareo izahay hanaja mpikambana hafa sy hevitra amin'ny teny anglisy.
Other anjerimanontolo any Aostralia
Ny Oniversiten'i Notre Dame Australia Fremantle
Ny Oniversiten'i New South Wales Sydney
Ny Oniversiten'i Sydney Sydney
Ny University of Queensland St Lucia
University ao amin'ny Sunshine Coast Sippy Downs
Education Rahalahy ny fianarana any ivelany gazety. Ho izahay hanampy anao mba hahita fampahalalana momba ny ilaina rehetra fianarana ambony any ivelany. Ianao mahita be dia be ny toro-hevitra mahasoa sy torohevitra, goavana maro ny ilaina tafatafa amin'ny mpianatra, mpanabe sy ny anjerimanontolo. Mitoera atỳ aminay, ary hahita ny firenena rehetra sy ny fanabeazana trano.
543 anjerimanontolo 17 firenena 124 Articles 122.000 mpianatra
News tsy ho ela
Discover firenena tsy ho ela
Discover asa tsy ho ela
Interviews tsy ho ela
Ampiharo izao trano tsy ho ela
Avia ho namanay
2016 EducationBro - Fianarana an-tany hafa Magazine. Zo rehetra voatokana.
politika fiarovana fiainan'olona|Site Terms & ampamoaka
Back to ambony